Ikhaya AMAZIKO EMZANTSI E-AMERICA FOOTBALL Abadlali bebhola ekhatywayo base-Uruguay I-Federico Valverde Ibali loBuntwana leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yeNqaku
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leGlaus Genius eyaziwayo ngegama lesidlaliso "Fede". Ibali lethu leFederico Valverde yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawuleyo ukususela ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku.
Ubomi kunye neRise yeFederico Valverde. IiCredits Zemifanekiso: Elobserver kwaye DailyMail
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba nguye mdlali onetalente ephezulu kakhulu, umdlali obhinqileyo ongaphumeleleyo nje kwiintliziyo zabalandeli beReal Madrid. Nangona kunjalo, bambalwa abambalwa abalandeli abajonga inguqulelo yethu yeFederico Valverde's Biography enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
I-Federico Valverde Ibali loBuntwana leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yaNcinci - Imvelaphi yoSapho kunye noBomi baKudala
UFederico Santiago Valverde dipetta owazalwa ngomhla we-22nd kaJulayi 1998 kuyise, uJulio Valverde kunye nonina uDoris Valverde kwisixeko esikhulu saseMontevideo, eUruguay. UFede, njengoko ebizwa njalo, wazalwa njengomntwana wesibini kubazali bakhe abathandekayo aboniswe ngezantsi.
Dibana nabazali bakaFederico Valverde- Utata wakhe, uJulio noMama, uDoris. Ityala lemifanekiso: ovaciondigital
UFederico uvela kwimvelaphi yosapho olukumgangatho ophakathi kunye nenkolo, wakhuliswa ngabazali abangamaKristu angamaRoma Katolika azinikeleyo. Njenge UDiego Forlán, ibhola ekhatywayo inosapho lwayo oluvela kwidolophu yase-Uruguay yaseMontevideo. Ngenxa yokuba ikomkhulu laseUruguay (iMontevideo) lalikhe laliBukhosi baseSpain (1724-1807), sinokuthi uFederico anganeengcambu zoSapho lweSpanish.
UFederico Valverde uneMvelaphi yakhe yoSapho evela kwisixeko saseMontevideo. IiCredits: i-theculturetrip kunye elobservador
UFederico Valverde akakhulelanga yedwa ecaleni kwabazali bakhe, kodwa kunye nomntakwabo omdala ogama linguDiego. Yayilikhaya ekuqaleni elingazi nto ngebhola, ngaphandle kwamalungu osapho okanye izihlobo ezichaphazelekayo. Umdlalo uqalile ngeyethu iFederico Valverde ngelixa wayenxibe iidayiphu.
Njengoninzi lwabantwana bokugqibela, uFrederico wayeluhlobo lomntwana owayenokucela nantoni na aze ayibone isenziwa ngomnwe wakhe. Emva ngelo xesha, akazange acele iithoyi, kodwa yibhola ekhatywayo. Njengomntwana (oneminyaka eyi-2), uFederico wenza utata wakhe isikhonkwane kwindawo yokuhlala kwiintsapho yakhe. Imini yonke ngaphandle, ebetha ibhola emnatheni kangangeyure, akora amanqaku asekhaya. Wayengazi ukuba wonke umntu wayesazi kwasekuqaleni ukuba yayiluphawu lokufika kwakhe.
I-Federico Valverde Ibali loBuntwana leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yaNcinci - Imfundo kunye neBraduer Buildup
Kwiminyaka ye-3, uFede wayenomnqweno ovuthayo wokujoyina iqela lebhola kwinqanaba lokufuna imfundo. Ngelixa wayenxibe iidayiphu, abazali bakhe bamenza wabhalisa ngempumelelo Iintsana zaBafundi beManyano, kwizifundo ezincinci kwisixeko saseMontevideo. Nangona wayengavumelekanga ukudlala imidlalo yaseburhulumenteni kuba wayengekho kwi-6 yobudala.
Kwiminyaka emithathu ubudala, kumdlalo ongekho semthethweni, uFede wafumana amanqaku akhe wokuqala kumdlalo ongekho mthethweni ngokuchasene nenye i-academy egama linguDanube. Ubusazi?… Kumthendeleko, umncinci webhola ekhatywayo ukhuphe ii-diapers zakhe ukuya kumangaliswa ngabalandeli. Kwimbuyekezo yokunqongophala kwemidlalo yaseburhulumenteni, iFederico encinci ngamanye amaxesha yathunyelwa njenge-mascot kumaqela amakhulu.
I-Federico Valverde encinci yayisetyenziswa njengeMascot ngexesha leentsuku zakhe zokuqala. Ityala lemifanekiso: I-Instagram
Kancinci, kancinci uFederico wakhula kwaye ngeloxesha wayeneminyaka eyi-5, i-academy ekwi-magnanimity yabo yagqiba ekubeni imnike ithuba lokudlala kwi-setup ye-academy eyenzelwe abantwana abaneminyaka eyi-6 nangaphezulu.
I-Federico Valverde Ibali loBuntwana leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yaNcinci - Ubomi bokuqala
Ukuqonda umnqweno wabo ongumfana wokuba ngumdlali webhola wabona abazali bakaFederico Valverde besenza konke abanako ukuxhasa izilangazelelo zakhe. Ngexesha awayejoyine ngalo, kwakungekho zihlangu zebhola zincinci kangako kwimilenze yakhe emincinci. Umama kaFederico Valverde kwafuneka atyelele iivenkile ezininzi, ekugqibeleni, wafumana ezasetyenziswa ecaleni.
Ngombulelo, iinzame zaqala ukuhlawula i-chap encinci ngaphakathi kweenyanga zakhe zokuqala zokudlala ibhola (Ngaphambi kokuzalwa kwakhe kwe-6th). Ubusazi?… UFederico Valverde wanceda iqela lakhe ekuphumeleleni indebe yakhe yokuqala yeNtshatsheli kunyaka we-2003 ngelixa wayesaluphele i5
I-Federico Valverde Iminyaka yokuqala yeBhola ekhatywayo- Umdlalo wakhe wokuqala. Ityala lemifanekiso: Elobserver
Uyaphumelela ngokuchasene nabadlali abadala kunaye kwaye uqhubeke ukuphumelela ubugqwirha bakhe bokuqala eneminyaka engama-5 ithenda yokunyusa amathuba akhe okufumana kwizifundo ezikhulu.
I-Federico Valverde Ibali loBuntwana leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yaNcinci - Indlela eya kwiNdaba ibali
Ngonyaka we-2008, ulonwabo losapho lakwaValverde aluzange lubekho mida xa uFederico omncinci wabizwa ukuba aye kuzanywa noPenarol, enye iklabhu yezemidlalo yase-Uruguay evela eMontevideo. Uphelezelwe ngumama wakhe ngenxa yovavanyo.
Emva kokusondela kwiseshoni yokuqokelelwa kwabantwana, inkwenkwe eneentloni incike emthini kwaye ayizange ishukume. Omnye wabaqeqeshi abaphethe ukukhetha abadlali oza kuvavanywa ngegama uNéstor Gonçalves wasondela kuFederico esithi; "Molo nyana! kutheni ungezi kuzodlala? Dlala!". UFederico (oneminyaka elithoba ubudala) wasabela kwangoko kwilizwi eligunyazisayo. Wakhawuleza ke wazimanya nabanye abantwana ukuze azivavanye.
UDoris, umam wakhe wabukela esi senzo kwaye weva umqeqeshi esithi unyana wakhe wayengumntwana onqabileyo ngokuqinisekileyo oya kwamkelwa. Ithe yakuva loo nto, umama onekratshi wahamba waya eNéstor Gonçalves esithi; 'Fede lo ubethetha ngaye ngunyana wam'. Kwangoko, umqeqeshi wabulela uDorin ngokumkhulisa kakuhle. Emva kwetyala eliphumeleleyo, uFederico ofanekiselwe ngezantsi wabhalisa kunye I-Peñarol.
Imifanekiso yeFederico Valverde emva kwetyala eliphumeleleyo kunye nePeñarol. Ityala lemifanekiso: Elobserver
Ukudibanisa U-Peñarol wamnceda ukuba aqhubele phambili ngokukhawuleza, emnika ukwamkelwa kwilizwe lonke kwiminyaka yakhe yeshumi elivisayo. Ngaphakathi iminyaka emibini yokuzijoyina, inkwenkwezi ekhulayo yafumana umnxeba kwiqela lesizwe lolutsha lweU15.
Ngexesha le-2015-2016 ngeli xesha wayekwigumbi lokufundela i-Peñarol, uFede wadibana negorha lakhe UDiego Forlan ojoyine iqela eliphambili leklabhu kwi-10th kaJulayi 2015. I-Uruguayan Legend eyayisondela kumhlala-phantsi yayisebenza njengotata wayo.
Dibana noFederico Valverde's Idol- Diego Forlán. Apha, kuyabonakala ukuba basandula ukugqiba iseshoni yokucebisa. Ityala lemifanekiso: Ibhanti
UDiego Forlán ucebise uFede kakhulu kubomi bakhe abancinci, emxelela ukuba asebenze nzima kwaye azithobe. Kungekudala, u-Federico okhulayo waphumelela kwisifundo kwaye wajoyina isithixo sakhe kwiqela leklabhu ephezulu. Ukucebisa khange kunike mpumelelo kwiFederico Valverde. Yimpumelelo efunyenwe kuye njengoko yena, kunye nesithixo sakhe (u-Diego Forlan) umaki kunye nokuncedisa u-Peñarol ukukhusela i-Primera División 2015-16 indebe.
UFederico Valverde kunye notitshala wakhe kunye nesithixo bakhokelwa nguPeñarol kwisihloko se2015-16 Primera División. Ityala lemifanekiso: Instagram, IBolavip.
Ngeli xesha iFederico yayiyi-17, isithixo sayo (I-Forlan) samshiya esiya kwenye iklabhu, ukukhula okwamenza waziva ephilile. Nangona kunjalo, ukuphumelela iCandelo leNkulumbuso nganye kwambona ukuba ubekw 'esweni ngumgcini weqela laseYurophu. Kwakuyi-Real Madrid ekhusele ngempumelelo ukutyikitya kwayo. Iklabhu yamvumela ukuba adlale kwiqela layo lolutsha (iReal Madrid B) apho wayelwelwe indawo kwindawo yeqela lakhe eliphezulu lokukhuphisana.
I-Federico Valverde Ibali loBuntwana leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yaNcinci - Ukunyuka Kwigama
Ngexesha e-Real Madrid B, uFederico wabizwa ukuba ayokumela ilizwe lakhe kwiNdebe yeHlabathi ye-FIFA ye-U-20. Uhambo lwase-Uruguay kolu khuphiswano lwaluchazwe kakuhle kukhuseleko oluqinileyo kunye nebala eliphakathi elinomtsalane ekhokelwa ngumntu ongenguye omnye umntu ngaphandle kukaFederico Valverde.
Emva kwetumente, uValverde uqhubile ukuphumelela ukhuphiswano lweBhola yeSilivere. Ifanekisiwe apha ngezantsi ecaleni kwakhe Dominic Solanke kunye noJangel Herrera- abaphumeleleyo kwiAdidas yeGolide kunye neSilver Ball ngokulandelelana.
UFederico Valverde uphumelele i-Adidas Ball yeBhola ekhatywayo yeFIFA U-20 yeNdebe yeHlabathi yeBhola ekhatywayo. Ityala lemifanekiso: FIFA
Endaweni yokuqunjelwa emva kokhuphiswano, umdlali wasembindini wexesha namandla, ngokufumana indlela yakhe kwiqela eliphambili leReal Madrid. Ukuze abe ngumdlali okhuphisana okwenyani kwindima ye-Real Madrid phakathi kwenkundla, wagqiba ekubeni aye kumava kwenye indawo, ethatha imali mboleko kwiDeportivo La Coruña, iklabhu emenze ukuba aqole.
Komnye wemidlalo kaDeportivo ngokuchasene neFC Barcelona, ​​uFede wadlala kakuhle, i-feat wayifumana Luis Suarez ebaleka esiya kwigumbi lokunxiba likaLa Coruña ukuya kumbulisa kwaye enxibe ihempe yakhe.
Ukubuya Kwemali-mboleko: Ukubuya kwakhe kwimali mboleko, uValverde waqala ukuchukumisa umphathi wakhe omtsha-uJulen Lopetegui ngexesha langaphambi kwe2018 / 2019. Ukusebenza kwakhe kumbone efumana isikhundla kwakhona kwiqela lokuqala le-Real Madrid. Emva kweLopetegui, umphathi olandelayo Santiago Solari ndaye ndachukumiseka kukubaluleka kokukhula noValverde kwiqela. Ukukhawuleza phambili kwixesha lokubhala, i-Federico ihlelanise kakuhle ne-Real Madrid, iphucula ngokuxhuma kunye nemida ngexesha lonke le-2019 2020.
UFederico Valverde ngoku uye waphakama kwaye wanamandla kwindima yakhe yaphakathi kwinqanaba neMadrid. Ityala: 90Min
Ewe!, Thina balandeli bebhola sikwindawo yokubona inkanyezi ikhula igqithe kwilizwe elizayo lomdlali oqaqambileyo phambi kwamehlo ethu. I-Federico Valverde Ngenene yenye, phakathi komgca wokuvelisa ongapheliyo we-midfielders omangalisayo kwibhola yehlabathi. Akakulungelanga ukusasaza kuphela amahlombe Luka Modric kwaye Toni Kroos kodwa umntu okhuphisana ngokubhukuqa nabani na kwezi grisi. Bonke abanye, njengoko besithi, yimbali.
I-Federico Valverde Ibali loBuntwana leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yaNcinci - Ulwalamano lobomi
Emva kwayo nayiphi na ibhola ekhatywayo ephumeleleyo, kusoloko kukho i-WAG enokuthi ikhuphe amehlo kwaye inqwenele ukuqiniseka indawo yayo njengentombi yakhe. Kule meko ka-Fede, ngokwenene kwakukho inenekazi eliqaqambileyo elihamba ngegama; Mina Bonino. Yena (enomfanekiso ongezantsi) waba yintombi yakhe emva kokuba uFederico eshiye intombi yakhe egama linguJuliet.
Dibana nentombazana enguFederico Valverde oyintombazana- uMina Bonino. Ityala lemifanekiso: I-Instagram
Umdibaniso wobuhle kunye nengqondo uqheleke kakhulu phakathi kwabahlobo bamantombazana abathobekileyo. Le yeFederico ayisiyonto eyodwa njengoko intombi yakhe ingumboniso we-TV ophumeleleyo kunye nentatheli. U-Mina Bonino wazalwa ngosuku lwe-14th ka-Okthobha i-1993 kuthetha ukuba uneminyaka eyi-5 emdala kunaye nesithandwa sakhe esidumileyo. Ngubani okhathalayo ngokwenene ... ... Emva kwayo yonke iminyaka, njengoko besitsho, linani nje.
UMina Bonino uyonwabela i-fanbase enkulu kwi-Instagram kunye nabalandeli abangaphezu kwe-250k kwiphepha lakhe le-Instagram (ngexesha lokubhala). I brunette entle ekhulisa ukuzithemba ecaleni kwendoda yakhe kuyo yonke into yabo. Njengoko kubonisiwe ngezantsi, bobabini banandipha ubudlelwane obulungileyo obakhelwe kuphela kubuhlobo.
UFederico Valverde kunye nentombi yakhe banandipha ubudlelwane obuqinileyo obakhelwe phezu kobuhlobo. Ityala lemifanekiso: I-Instagram
Ngaphandle kwayo umahluko kubudala babo, bobabini abathandi bazibona bengaphaya kwamaqabane nje okanye ngabathandi - kodwa abahlobo abahamba phambili. Banenkathalo enzulu omnye komnye kunye ne-ofcourse, bathandi abanomona. Lo mona ngamanye amaxesha unokubangela iimfazwe ezinentliziyo elula phakathi kwezi zimbini. Kwanele ngokuthetha !!... .. Ngoku makhe sikunike umongo!
Ngoku ka Ilanga, UValverde waqala imfazwe enentliziyo elula yamagama kunye nentombi yakhe emva kokuba eyibone ukuba ilayishe i-selfie ye-cheeky etyhila uninzi lwamalungu omzimba abuthathaka ku-Instagram. Amagqabantshintshi akhe kwisithuba aqokelelene phezulu kumakhulu okuthandwa koluntu kwimizuzu nje embalwa.
Ifoto eyabangela imfazwe elula phakathi kukaFederico nentombi yakhe- uMina Bonino. Ityala lemifanekiso: Ilanga
Ubusazi?… U-20 oneminyaka eli-ubudala ubudala wayehlekisa malunga nentombazana yakhe engamthathi qatha kwanasemva kokulala ubusuku bonke, kuthetha ukuba uyanxiba imini yonke. U-Mina Bonino wafumana impindezelo yakhe evuthayo ngexesha lokugxotha kwakhe esithi isithandwa sakhe sase-Uruguay asenzi njalo Hlamba impahla yakhe yangaphantsi. Ngamazwi akhe;
"Ewe, ndikhetha ukuba ne-T-shirt enye kodwa andifuni ukunxiba ibhulukhwe enye ngeveki njengawe."
Bobabini abathandi bafumana abalandeli bekhathazekile ngemeko yolwalamano lwabo emva kokutshintshiselana ngentliziyo yamagama. Ngombulelo, kwiintsuku ezimbalwa kamva, intombi kaFede uBonino yangqina abalandeli ukuba zazingezizo iimvakalelo ezinzima phakathi kwabo. Oku kuye kwaqwalaselwa xa wathumela i-snap yabo ngesihloko esithandekayo malunga nothando lwabo olunzulu omnye ngomnye.
I-Federico Valverde Ibali loBuntwana leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yaNcinci - Ubomi bomntu
Ukwazi uBomi baFederico Valverde bube buthathaka kunokukunceda ukuba ufumane umfanekiso opheleleyo wobuntu bakhe kude kwephawundi.
Ukuqala, ungumntu onendawo engaphakathi yenkululeko eyenza inkqubela phambili ebalulekileyo kubomi bakhe bobuqu kunye nobungcali. I-Federico ngamanye amaxesha inesidingo esinzulu sokuchitha ixesha lodwa kwaye kude nayo yonke into. Ukhetha ukuhlala ubukhulu becala elwandle ukwenzela ukuba azibuyise kuxinzelelo lomsebenzi.
Ukuqonda uBomi baFederico Valverde buqu kude nemisebenzi yebhola. Ityala: IG
Kwakhona kubomi bakhe bobuqu, uFede ngumntu onentliziyo ethambileyo, ongaphandle kwesandi esenza yonke into eyimfuneko ukuthintela ukungqubana. Ngokumalunga nemicimbi yentliziyo yakhe yesisa, ukhetho lukaFede lokuba nentombi eneminyaka eyi-5 emdala kuye kufanelekile. Ungumntu ongathandanga amaqabane angenasidima okanye angathembekanga kwaye ufuna ukuba kunye nenenekazi elivuthiweyo eliqonda indlela yakhe enzima yemihla ngemihla njengomdlali webhola.
I-Federico Valverde Ibali loBuntwana leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yaNcinci - Ubomi Bentsapho
Iposti ebekwe kwikhaya lakhe ngoku iyimbali. UFede oyindoda ngoku uyigcinile njenge souvenir ukukhumbula amava akhe obomi angaphambi komdlalo. Namhlanje, konke malunga nokuqokelela imbeko yakhe umntu kunye neklabhu kwikhaya losapho lwakhe.
I-Federico Valverde efanekiswe ecaleni kweqela lakhe lomntu kunye neeklabhu ezigcinwe kwikhaya losapho lwakhe. Ityala: Ibhanti
Okungakumbi kuTata kaFederico Valverde: Emva ngelo xesha, uJulio utata wakhe wayehlala esemsebenzini ngelixa unkosikazi wakhe wayejongile unyana wabo. Namhlanje, utata omkhulu uneqhayiya ngokuba unyana wakhe sele eyindoda kwaye engasengumntu oselula owayesoloko ephakamiselwa kuqeqesho. Ngamazwi akhe; "Intaka encinci iye yaba yiNtaka enkulu, ethi xa abachasi beyibetha, ivuke ngokulula kwaye iqhubeke". Nangona engenamandla kwimpilo yakhe njengomfazi wakhe, uJulio (ofanelwe ngezantsi) ngutata othanda ibhola ekhatywayo kwaye othanda ukuxoxa ngebhola kunye nonyana wakhe.
UValverde kunokwenzeka ngolonwabo nabazali bakhe- Utata wakhe, uJulio kunye noMama, uDoris. Ityala: ovaciondigital
Okungakumbi kwiFederico Valverde's Mum: Ngeli xesha uFederico esiya eYurophu, umamakhe wenza ukuba abe ngumama ngokuqinisekisa ukuba yena nomyeni wakhe uJulio bamlandela baya eMadrid. Bonke babehlala eMadrid kwaye wayeqinisekisa ukuba uFede uyaqhubeka nokonwabela izitya zakhe ezithandekayo.
UDoris wayenamava amnandi ngelixa wayehlala eMadrid. Uza kuya eBernabau, endaweni yakhe ukhetha ukubukela unyana wakhe ekhayeni ngeTV. Yayingamava ahlukileyo xa esiya Ivenkile Ivenkile Ivenkile Yezinto Ezincinci UDoris ngelixa emarikeni wayesiva abantu bethetha ngonyana wakhe. Nje ukuba uthethe amagama, abantu baya kufuna ukwazi ukuba avelaphi kuba ithoni yakhe yahlukile. Kwangoko uphendula ukuba uyi-Uruguayan, umbuzo olandelayo uza kuba;
Ngaba ungumama weFede Valverde?.
Imeko yangoku yezinto: Emva kwexesha, njengoko uFederico ekhule ngokupheleleyo, abazali bakhe bacela ukubuyela eMontevideo. Baye bavumela unyana wabo ukuba aqhubeke kunye namava akhe eMadrid kunye nomntakwabo Diego. Ukubuyela kwabo kwilizwe labo, uFede wafumana into yokulala kwigumbi lokulala nabazali bakhe. Utata wakhe kunye nomamakhe ngexesha lokubhala bakhona e-Uruguay kwaye bayatyelela unyana wabo rhoqo emva kweenyanga ezintandathu.
Okungakumbi kuMzalwana kaFederico Valverde: Kuncinci kakhulu okwaziwayo malunga nomntakwabo kaFederico ohamba ngegama likaDeigo. Ngelixa ukuthintela ingqalelo yoluntu, kunokuba yinto yokuba u-Diego akenzi enye into ngaphandle kokujonga umsebenzi womntakwabo omncinci.
I-Federico Valverde Ibali loBuntwana leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yaNcinci - yokuPhila
Ukwazi indlela yokuphila kaFederico Valverde kuya kukunceda uqonde umgangatho wakhe wokuphila. Xa kuziwa emalini, i-Federico inetalente yokugcina ulungelelwano phakathi kokuchitha kunye nokonga. Umvuzo wakhe weveki unele nje ukuba awusebenzise ukukhathalela usapho ngelixa eqhuba imoto efanelekileyo. Ifoto engezantsi ishwankathela indlela yakhe yokuphila ngokuthobeka.
UFederico Valverde Car- Ufanekiselwa nomntu ojongeka njengo-Diego, umntakwabo omdala. IiCredits: Tumblr kunye ne-Twitter
I-Federico Valverde Ibali loBuntwana leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yaNcinci - Inyaniso engekho
Waye wagula ngenxa yeengxaki zelizwi kunye nokuphefumla: Kude kube yi-2016, uFederico Valverde wayenomsebenzi ogqibeleleyo, de waqala ukuba nemicimbi yokuphefumla. Oku kwalandelwa kukutshintsha kwelizwi lakhe ngequbuliso kwabangela ukungonwabi kwaye phantse kwasongela nomsebenzi wakhe.
UFederico Valverde wayekhe waba nomcimbi kunye neeLungs kunye nelizwi. Ityala: I-clevelandclinic, Wkipedia kunye ne-Aidsmap
U-Federico uchithe elo xesha linomngeni kugqirha wezilwanyana (Ingcali ekufundisiseni nasekuphathweni kwezitho, ikakhulu umlomo, umqala, iintambo zokuthetha, kunye nemiphunga). Emva kwexesha elithile lokuphumla, umdlali webhola onenhlanhla wabala ngokubuya okumangalisayo ukuqhubeka nomsebenzi wakhe kunye neReal Madrid.
Iklabhu yakhe yabantwana yafumana i- $ 11,300 yokudluliselwa kwakhe eMadrid: The Abafundi beKlabhu yeManyano, apho i-Federico yaqala khona ebomini bomntwana yanikwa i- $ 11,300 njengendawo yokuhlala ngokunyukela kwakhe kwiReal Madrid. Ubusazi?… yayiyeyona mali iqeshisayo igqithisileyo iklabhu eyakha yazifumana kwimbali yayo. Iimali zisetyenziselwe ukulungisa uphahla lweklabhu evuzayo, imibhobho yokuhambisa amanzi, ukufakwa kwegrisi phakathi kwezinye izinto.
Ekuphela kwempikiswano yakhe: UFederico uzuze impikiswano enye kuphela kwikhondo lakhe lomsebenzi ukuza kuthi ga ngoku (ngexesha lokubhala). Kwi I-2017 yeFIFA ye-20 yeNdebe yeHlabathi Umdlalo we-quarter-fainali ngokuchasene nePortugal, i-Uruguay ibonakalise imbonakalo yobuso njengoko yayisebenzisa iminwe yakhe ukuthoba amehlo akhe emva kokufumana isohlwayo. Isenzo sakhe sathatyathwa njengobuhlanga. Kwagxekwa amashumi amawaka abalandeli bebhola kwihlabathi liphela. U-Federico, xa ebuzwa ngesenzo sakhe, wachaza ukuba lo mbhiyozo wawenzelwe umhlobo wakhe kunye nearhente ehamba ngegama "El Chino" Saldavia.
Wake waziva ebuhlungu njengo-Diego Maradona: Emva kwemini ngoMeyi 19, 1978 inembali yayo. Kwakuloo nyaka, umqeqeshi wase-Argentina u-César Luis Menotti wemka Diego Armando Maradona (umdala 17) ekukhetheni kwakhe iNdebe yeHlabathi. Kakhulu ukucaphuka u-Diego wakhala kakhulu kwaye ukuphoxeka kwamguqula.
Ubusazi?… UFederico wehlelwa yinto efanayo njengoko waphoswayo kwiNdebe yeHlabathi ye2018 ngumqeqeshi wakhe uMaestro Tabárez. Wayenguye wayeneminyaka emibini kuphela emdala kuneenkwenkwezi zaseArgentina ngelo xesha (1978). Ufunde kumava kaMaradona okwamomeleza. Ngexesha lokubhalwa, Fede ngokupheleleyo inxalenye yeqela lesizwe leqela elipheleleyo ukuya kwi-3 ikomityi yehlabathi eseleyo. Ngombulelo, unomvuzo ofanelekileyo weveki, umvuzo ofanelekileyo wonyaka, kunye ne-750 yezigidi ze-euro zikhupha igatya.
QHUBEKA: Ndiyabulela ukufunda kwethu iFederico Valverde Ibali loBuntwana leNqaku leNgcaciso yeWebhu yeNobold. Ku- LifeBogger, sizabalazela ukuchaneka kunye nokuthe tye. Ukuba ufumanisa into engakhange ilunge, nceda wabelane nathi ngokuphendula ngezantsi. Siya kuhlala sizixabisa kwaye sihlonipha izimvo zakho.
I-Story ye-Ferland Mendy yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Brahim Diaz Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Klaas-Jan Huntelaar Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
UJames Rodriguez Ibali leBantwana leNdaba ye-Untold Biography Facts
Umhla oguqulwe: Matshi 6, 2019